आज ओली–प्रचण्ड भेट, देउवाका लागि छटपटी
HOME » आज ओली–प्रचण्ड भेट, देउवाका लागि छटपटी
डिसी नेपाल , ११ पौष २०७४
काठमाडौं। माओवादी–एमाले पार्टी एकीकरण, नयाँ सरकार गठन, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कानुन सम्बन्धी विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज छलफल गर्दैछन् । एक अर्काप्रति अविश्वास बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो भेट महत्वपूर्ण हुनेछ । चुनावी परिणाम पछि मधुरो बन्दै गएको पार्टी एकीकरणको स्वर र कठ्ङ्ग्रिएको ओली–प्रचण्ड सम्बन्धबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्राप्त न्यानो अब के होला? दुई अध्यक्षको आजको भेटले प्रष्ट्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड गृहजिल्ला चितवनमाबाट राजधानी आउँदैछन् । ओली राजधानीमै छन् । यी दुई नेताबीच चुनावी अभियानताका जस्तो न्यानो सम्बन्ध छैन । मौषमी चिसो जस्तै वाम गठबन्धनका यी शीर्ष नेताबीच सम्बन्ध कठ्याङ्ग्रिएको छ ।
साता अघिको साझा पत्रकार सम्मेलनपछि यी दुई नेता सँगसँगै देखिएका छैनन् । यो बीचमा केही एमालेका शीर्ष नेताको अभिव्यक्तिसँग स्वयं प्रचण्ड र माओवादीका शीर्ष नेताको भनाइ बाझिएको छ । दुई दलका नेताले एक अर्कालाई आरोप लगाउन समेत पछि परेनन् । चुनावसम्म सौहार्द रहेको यी दुई दलको सम्बन्ध चिसिँदै गएको यो पृष्ठभूमिमा यी दुई शीर्ष नेताको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
हुनसक्छ ‘टर्निङ प्वाइन्ट’
आज हुने भनिएको ओली–प्रचण्ड भेट आगामी राजनीतिक दिशा निर्देश गर्ने ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुने अपेक्षा गरिएको छ । एमाले माओवादीबीच बढेको अविश्वास टर्यो भने आगामी ५ बर्षका लागि यी दुई दल सहकार्य गर्नेछन् । विश्वास टर्यो भने राजनीति गिजोलिएर ‘वाम लिक’ भन्दा बाहिर जाने संभावना छ ।
शक्तिको लालसा हुनु मानवीय गुण हो र देउवा यसबाट अछुतो छैनन् । तर, निर्वाचन परिणामको जनादेश देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने होइन । जनताले बामपन्थी एकतालाई विश्वास गरेको अवस्थामा यो एकता भाँडेर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु जनादेश विपरित हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम र पछिल्लो समय विकसित राजनैतिक घटनाक्रमले देखाउँछ – देशको आगामी पाँच वर्षको कार्यदिशा यी दुई नेताको सम्बन्धले निर्धारण गर्नेछ । यी दुई नेताको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहेको अवस्थामा देशले पाँच वर्ष स्थिर बामपन्थी सरकार पाउने लगभग सुनिश्चित हुनेछ । यी दुईको सम्बन्ध चिसिएमा अब बन्ने सरकार पहिलेजस्तै म्यादी र अस्थिर हुनेछ । आजको भेटले पार्टी एकताको विषयलाई टुंगो लगायो र दुई पार्टी एक भए भने आगामी पाँच वर्ष कसैले पनि बामपन्थी सरकार हल्लाउन सक्ने छैन ।
२०४८ सालदेखि सत्तामा हालिमुहाली गरिरहेको कांग्रेस अप्रत्याशित पराजित भएपछि अब ऊ चुप लागेर बस्ने छैन । २०६४ मा दोस्रो पार्टीमा झर्दा पनि राजनैतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै सत्ताको स्वाद चाखेको कांग्रेसको ‘स्वादे जिब्रो’ अब ५ वर्षसम्म सत्ताबाहिर बस्नको लागि तयार छैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा अप्रत्याशित रुपमा पार्टी पराजित हुँदा पद हस्तान्तरणको कुरा त परै जाओस् अहिलेसम्म पराजयको नैतिक जिम्मेवारी पनि लिएका छैनन् । यसको अर्थ हो देउवामा अझै पनि सत्ताको लालसा छ र उनी सत्ता र शक्ति आर्जनको लागि प्रयासरत छन् ।
केही दिन यताको संवादहीनता तोड्दै दुई शीर्ष बामपन्थी नेताले आज छलफल गर्दैछन् । यी नेताको छलफलले पार्टी एकीकरणका लागि सकारात्मक निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एकता भाँड्ने ‘देउवा चलखेल’को कालो बादलको किनारामा ‘चाँदीको घेरा’ पनि छ, त्यो के हो भने यी दुई नेताले कहिल्यै पार्टी एकताको विपक्षमा बोलेका छैनन् ।
देउवाले सत्ताको लागि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिसकेको स्वयं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नवलपरासीमा भनेकै हुन् । त्यतिबेला प्रचण्डले आफूलाई ‘अफर’ आएको भए पनि आफूले एमालेलाई धोका नदिने बताए । तर, देउवाले यस्तो प्रस्ताव फेरि पनि गर्नेछन् किनकि उनलाई एमाले–माओवादी सम्बन्ध बिगार्नु छ । यी दुई पार्टी एकीकरण हुनु देउवाको लागि निकै अशुभ हुनेछ । एमाले माओवादी एकीकरण हुनेबित्तिकै तत्कालको लागि देउवाले सत्ताको स्वाद चाख्न पाउने सम्भावना समाप्त हुनेछ । अतः देउवा यस्तो हुन नदिन हरसम्भव प्रयास गर्नेछन् ।
देउवाले पार्टी सभापति पद आफ्नै कब्जामा राख्न पार्टीभित्र प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइरालाका बीचमा खेलिरहेको खबर बाहिरिइसकेको छ । देउवाको पदलालसा हेर्दा उनी पार्टीभित्र सभापतिसहित संसदीय दलको नेताको पद पनि हत्याउन चाहन्छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । तत्कालका लागि देउवा पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता बन्ने प्रयासमा छन् । किनकि कांग्रेसको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीको लाइनमा हुन्छ । पार्टीको संसदीय दलको नेता हुनासाथ उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा त यसै पनि पुग्नेछन् । एमाले र माओवादीको एकता भाँड्न सके उनी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि छ ।
शक्तिको लालसा हुनु मानवीय गुण हो र देउवा यसबाट अछुतो छैनन् । तर, निर्वाचन परिणामको जनादेश देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने होइन । जनताले बामपन्थी एकतालाई विश्वास गरेको अवस्थामा यो एकता भाँडेर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु जनादेश विपरित हुन्छ । जनादेश विपरित राज्यसत्ता संचालन हुनु देशको लागि हितकर हुँदैन । यसले थप अस्थिरता निम्त्याउनेछ । आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोको अवरोध एमाले–माओवादी एकता भाँड्न देउवाले गर्ने प्रयासको छायाँमा हुन लागेको आजको ओली–प्रचण्ड भेट निकै अर्थपूर्ण छ ।
प्रचण्डले एमालेमाथि शंका गर्दै गर्दा पनि भनेका छन् ‘अरुले लोभ देखाए पनि म विश्वासघात गरेर जान्न ।’ उता ओलीले पनि ‘पार्टी एकतामा कुनै शंका नगर्न’ अपिल गर्दै आएका छन् । पार्टी एकीकरणका लागि दुई नेताको यही प्रतिबद्धता आजको बैठकमार्फत अनुमोदन हुँदै कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्यो भने मतदाता र नेता कार्यकर्ताका लागि उत्साह हुनेछ । यदि यसो हुन सकेन र अविश्वास बढ्यो भने एकले अर्कोलाई देखाइदिने होड चल्ने छ र राजनीति एकपछक फेरि अनिश्चिततातर्फ धकेलिनेछ।
बेलायतमा रोमान्टिक मुडमा साम्राज्ञी र धिरज
‘सुश्री सम्पत्ती’मा सलोन र साराको जोडी बाँधिने पक्का
‘शेरबहादुर’को नयाँ पोष्टर सार्वजनिक
केकीको ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’मा समावेश ‘सिओ डब्लु काउ’ बोलको गीत सार्वजनिक
संसदीय दलमा देउवासँग भिड्दै प्रकाशमान
ओली र मोदीबीच टेलिफोनवार्ताः के-के भयो कुराकानी ?
संयुक्त अरब इमिरेट्सको नक्साबाट कतार गायब !
सर्यो ‘रोमियो एण्ड मुना’को प्रदर्शन मिति, चैतमा लाग्नेछ चलचित्र
ट्रम्पको अमेरिकी नेतृत्वमा एक बर्ष, नागरिक विभाजित
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि एमालेले क-कसलाई बनायो उम्मेदवार? (सूचिसहित)
रारा गोल्डकप : उद्घाटन खेलमा सुदूरपश्चिम ११ विजयी
गौतमको हत्यामा संलग्न नौ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश
फागुन २४ देखि काठमाडौंमा अन्तराष्ट्रिय व्यापार मेला, व्यापारिक कक्षका लागि ‘बुकिङ’ खुल्ला
संसद् सचिवालयका दुवै सचिवले लिनेभए स्वेच्छिक अवकाश
युवाहरूकाे मानसिकता फराकिलो हुनुपर्छ : पूर्वमन्त्री ढकाल
अलास्कामा शक्तिशाली भूकम्पपछि खतरनाक सुनामीको चेतावनी
कैलालीमा पेस्तोलसहित दुईजना पक्राउ
वाम गठबन्धन र मधेशी गठबन्धनबीच कुरो मिलेन
आहा ! इलामको अन्तु पोखरी